Artifact: Valve's Addictive Dota 2-Yakavakirwa Kadhi Game Inowanikwa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Unogona kusada mitambo yemavhidhiyo yemakadhi, chokwadi vamwe vangaratidzika kunge vanofinha, vamwe nekuda kwekuita kwavo zvakapusa muropa sezvazviri nePySol kana yakafanana (Solitaire mhando) iyo inouya mumapakeji ekushandisa enzvimbo dzedesktop. Asi zvirokwazvo, pamwe Artifact ive imwe yeakanakisa makadhi evhidhiyo yenguva dzichangopfuura, kupindwa muropa zvakanyanya uye izvo zvakatodanana nevashandisi vazhinji, kunyanya avo vanoda rudzi urwu rwemutambo kana ivo Dota 2 vatambi ivo pachavo, nekuti zvinoenderana neyakakurumbira Valve mutambo ...
Valve yakagadzira Artifact yakavakirwa paDota 2 Sezvandareva, ndichiwedzera akakosha ezve Dota 2 zvakasikwa kumutambo uyu, zvese zviri musita, mutambo wemitambo uye kumisikidza. Uye ikozvino inowanikwa kutamba pane yako yaunofarira GNU / Linux kugovera. Uye zvakare, ivo vane kutsigirwa kweasina mumwe kunze kwemusiki weMagic Kuunganidza, ndiko kuti, Richard Garfield. Uye mushure mekubudirira kwayo beta chikamu umo maakawana rutsigiro rwakanyanya, ikozvino unogona kuiwana mune inozivikanwa Chitoro online chitoro yePC, Mac uye Linux.
Naizvozvo, kana isu tikawedzera a kadhi mutambo Kana ikashandiswa naDota 2, mhedzisiro mutambo wevhidhiyo uko chinangwa chedu chinenge chiri chekuparadza kanenge maviri matatu matatu evatambi vedu mumutambo unozoitika munzira nhatu dzehondo. Makadhi aya achave nemagamba aunogona kusimudzira maererano nemasimba, kuwana zviwanikwa zvemutambo, uye kutonga pamusoro pevakwikwidzi vedu kuti vakunde.
Rudzi urwu rwekadhi kana bhodhi mutambo wakaiswa mune imwe bhaisikopo kana vhidhiyo mutambo wepasirese wakave nekubudirira kukuru pakati pevateveri vakatenga mabhodhi kana makadhi kubva kune avanofarira akateedzana, mafirimu kana mitambo yemavhidhiyo yekutamba kumba. Asi ikozvino Valve yaunzawo iyo nyika ye varaidzo yedhijitari, ichiita kuti itambe pachiratidziri chimwe uye nekurwisa vanopikisa kubva kutenderera pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Artifact: Valve's muropa Dota 2-yakavakirwa kadhi mutambo unowanikwa kune Linux
CudaText: yemahara, yakavhurwa sosi, muchinjika-chikuva kodhi mupepeti